Hogaamiyaasha alliansen oo maanta kulan ku leh guriga Annie Lööf - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Alliansledarna på ett café i Stockholm. Foto: Fredrik Persson/Scanpix
Hogaamiyaasha alliansen oo maanta kulan ku leh guriga Annie Lööf
La daabacay måndag 25 februari 2013 kl 10.19
Maanta hogaamiyaasha xisbiyada bah-wadaaga ah ee alliansen ayaa ku kulmaya guriga Annie Lööf ee ku yaala Maramö gobalka Småland. Xisbiyadaan hanti-goosadka ah ee haya talada dalkaa ayaa waxaa culeys ku hayo shaqo la'aanta baahsan ee dalka ka jirta iyo weliba eedeymo ugu imaanaya xisbiyada mocaaradka ah oo oranaya in ay yahiin kuwo daalan oo fikrad la'aan ah.
Sidoo kale xisbiga Centern iyo Krisdemokraterna ayaa tirokobyo la sameeyey lagu ogaadey in taageeradooda shacab ay aad u hooseyso. Xisbiyadaan ayaa dhanka kale u muuqda kuwo aan dhanka mabaadiida ka mideysneyn, iskana helin, sida ay qabto Heidi Avellan oo ah tafitiraha wargeyska Sydsvenskan.
- Waagii ay Maud Olofsson hogaamineysey Centern waxay xisbiyadaan u muuqdeen kuwo niyad u haya in ay wax isla qabtaan. Waxaana moodaa in ay doonayeen in loo arko kuwo wado shaqeyn wanaagsan ka dhaxeyso oo iska hela. Hada arintaas meesha way ka baxdey. Waxey u egyahiin in ay isku daaleen, ayey tiri Heidi Avellan.
Waxay aheyd kulankii Almedalen xagaagii hore markii Anie Lööf si layaab leh ugu marti qaadey hogaamiyaasha kale ee allianska kulan ka dhaca deegaankeeda Maramö, si ay u wado dhisaan waxay ugu wacdey "alliens 2.0". Arintaan ayey ku dhawaaqdey kadib markii ay ka cabatey in aysan alliensen ka dhex jirin "reformer" ama dib u habeyn. Arintaas oo ka dhax abuurtey cadho alliensen gudahiisa. Sideed bilood ayey qaadatey in la qabto kulankaas ay baahisey oo hada la go'aansadey in la qabto.
Hadafkana waxuu yahay in dib loo soo celiyo guushii uu dhaliyey kulankii Högfors 2004. Kulankaas oo hogaamayahii hore Centern Maud Olofsson laheyd qanban qaabadiisa iyo marti qaadkiisa. Kulankas ayaa hooyo u ahaa dhisida iskutaga alliansen oo ay ku bahoobeen xisbiyada hanti goosadka ah, arintaas oo markii danbe keentey guushii dorashadii 2006.
Laakiin caqabadaha maanta jiraa way ka gedisanyahiin kuwii markaas jirey, laakiin hadafka waa isku mid oo waxaa la doonayaa in la dejiyo istaraatajiyed lagu galo doorashada soo socota iyo su'aalaha ay tahay in laga wado shaqeeyo ama aan laga wado shaqeynin, ayey qabtaa Heidi Avellan.
- Hada muhiim weeye in ay isla meel-dhigaan su'aalaha aysan ka wado shaqeyn karin. Arintaas oo aad mahiim ugu ah sadexda xisbi ee ugu yaryar alliasen madaama ay wataan siyaasad ayaga u gooni ah. Xisbiyada Kristdemokratiga iyo Centern dhanka tirokoobka taageerada meel xun ayey marayaan oo qarka ayey u saaranyahiin in ay ka hoos maraan 4 procenti ee lagu galo golaha shacabka. Saas darteed waa in ay si kale isku muujiyaan oo su'aalo gaar ayaga u ah ku doorasho tagaan, tan xataa sidoo kale xqiiqdii wey quseysaa xisbiga shacabka ee folkpartiet.
Si kastoo oo ay xisbiyada kale ee allianska ugu hadlaan arimaha iskuulka waxaa cad in Folkpartiet loo deyn doono arimaha iskuulka marka laga hadlayo gudaha alliasen. Centerna loo deyn doona arimaha bay'ada, Kristdemokratigana arimaha bulshada, ayey qabtaa Heidi Avellan. Balse xisbiga Moderatkana loo denyano kaalinta ah xisbiga xanbaari kara qaranka oo kuna guuleystey in uu Iswedhen soo mootiyo xaalad dhaqaalo xumo oo aduunka ka taagan.
Laakiin xaalada Moderaterna ayaa ah mid adag hada. Madaama hadii olalaha doorashada lagu guuleysto ay ka micno tahay in xisbigo codad ka leexsado xisbiyada kale ee ay bahwadaaga yahiin ee alliansen. Taas oo qatarta ay u keeni karto xisbiyada yaryar ay noqoneyso in ay soo gali waayaan golaha shacabka. Sidaas darteed ayey Moderaterna u baahanyahiin in ay tartiibsadaan oo soo hormariyaan xisbiyada kale ee ay bahwadaaga yahiin. Dhanka kalena hadii xisbigu sidaas sameeyo oo aysan soo bandhigin su'aalaha ayaga gaarka ay u xiiseynayaan taas waxay keeni kartaa in ay xisbiga ku dhacdo tii ku dhacdey Socialdemokratiga dorashadii 200, ayey tiri Heidi Avellan.